चितवनका प्रहरीमाथि सामान बोकेका ट्रकलाई पैसा मागेको आरोप ! - समसामायिक | Kantipur TV HD
चितवनका प्रहरीमाथि सामान बोकेका ट्रकलाई पैसा मागेको आरोप !
चितवनका प्रहरीमाथि सुरक्षा जाँचका नाममा भन्सार तिरेको कागजपत्र देखाउँदा पनि सामान बोकेका ट्रकलाई गन्तव्यसम्म जान नदिएको र पैसा मागेको आरोप लागेको छ । तर व्यापारीको आरोप प्रहरीले भने अस्वीकार गरेको छ । वीरगन्जबाट उपेन्द्र ठाकुरको रिपोर्ट -
वीरगन्जबाट व्यापारीको सामान बोकेर काठमाडौंका लागि गुडेको सादा रोड क्यारियरको ना ३ ख ४५५९ नम्बरको ट्रकलाई चितवन प्रहरीले गोन्द्राङ चेक प्वाइण्टमा रोकेर चेक गर्‍यो । र, उक्त कार्यमा संलग्न प्रहरीले लाइन नमिलाएको भन्दै सोझै ५० हजार रुपैयाा मागे ।
ट्रकमा बिलबिजक र भन्सारको प्रज्ञापन अनुसार नै सामान थियो । तर प्रहरीले पैसा नपाएपछि न्युन बिजकीकरणको सामान भन्दै कारवाहीका लागि ट्रकलाई वीरगन्ज भन्सार पठायो । तर न्युन बिजकीकरणको विषय आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र नपर्ने भन्दै भन्सारले ट्रक बुझ्न मानेन । त्यसपछि प्रहरीले प्रतिवेदन नै परिवर्तन गरी ट्रकलाई बेवारिसे भनेर पुनः भन्सारमा पठायो ।
सीमावर्ती बजारबाट गुड्ने मालबाहक सवारीसाधनले आफूले बोकेका सामानको बिजबिजकको छाायाप्रति पथलैयास्थित राजस्व अनुसान्धान कार्यालयमा बुझाउने गरेका छन् । बिलसहित काठमाडौं पठाइएको आफ्नो सामानलाई प्रहरीले के आधारमा बेवारिसे भन्यो ? व्यापारीले बिल देखाउादै प्रहरीसाग प्रश्न गरेका छन् ।
प्रहरीले बिलसहितको सामानलाई बेवारिसे भनेको मात्र होइन धेरै सामान बेपत्ता पारेको व्यापारीको आरोप छ । यस्ता आरोपबाट बच्न प्रहरीले आफ्नो कार्यशैलीमै सुधार गर्न आवश्यक छ । गल्ती गर्ने प्रहरी माथि विभागीय कारबाही हुन्छ कि हुन्न त्यो भने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।